Reader martinvrijland.nl ubonakala esenza isenzo esikhulu seqhawe ngexesha lobuhlanya bentsholongwane ye-corona: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	9 Matshi 2020	• 7 Comments
Apho i-coronavirus ibonakala ngathi isasazeka nzima kwaye ibangela uloyiko, umfundi osisilumkiso wale ndawo ukwazi ukwenza into entle. Xa waphaphama, wafumanisa ukuba intsholongwane ibonakala inefuthe elikhulu kuqoqosho, kodwa ke ukuba bubble kwezemali bekusoloko kusithiwa kuqhuma.
Ngelixa ndifunda amanqaku kule webhusayithi, kwabonakala kufanelekile ukuzibuza ukuba ngaba intsholongwane ye-corona yayinamandla aphezulu. Wafumanisa ukuba i-coronavirus ibonelela nge-1% (ebambe inani elilingana nesiqingatha sabantu behlabathi) ngesizathu sokuvusa i-bubble yezemali.
Emva kokufunda amanqaku kule webhusayithi, wafumanisa ukuba umbhali kudala elumkisa malunga nokuqhushumeza le 'yonke into bubble'. Ngokufunda incwadi yakhe, wafumanisa ukuba umbhali naye uxele kwangaphambili ukuba ubhubhani wehlabathi lonke kufuneka unyanzelise uxanduva lokugonya kwihlabathi liphela. Kwakule ncwadi wafumanisa ukuba kukho umbhalo we-master kwaye indlela ilungiswa ngurhulumente wehlabathi emva kokuba enye imfazwe yehlabathi ilandele. Wow!
Ke xa waphakama wagqiba ekubeni enze into ekhethekileyo. Waye waqonda ukuba umbhali ebezabalazela kangangeminyaka ukuveza inyani, apho azincama khona esenza uhlaselo. Waye waqonda ukuba lo yayingumsebenzi obalulekileyo kwaye wakhumbula ukuba umbhali wakha wathi ukuba bonke abafundi bangaphoswa yimali encinci ngenyanga, unokuphila.
Xa waphaphama, wagqiba ekubeni athathe inyathelo elikhulu lokuqhubela phambili ngokweemvakalelo. Yayiyinto nje encinci, kodwa wabona kwangoko ukuba kulungile kuye. Umsebenzi wakhe wanika ithuba.
"Ndingenza ntoni kula maxesha axakekileyo? Kubaluleke kangakanani ukuba umntu aphumle ngaphandle? Kubaluleke kangakanani ukwenza ikhonkrithi? Kubaluleke kangakanani ukwazi? Ndingenza ntoni?Wazibuza.
Kungenxa yoko le nto wagqiba ekubeni lilungu lee-euro ezimbini ngenyanga. Oko kuvakala kulungile! Ukususela ngoku wayesazi ukuba unegalelo kwinto yakhe kumlo wokutshintsha. Ngothando olukhulu, wabelana ngamanqaku awayefak 'isandla kuye. Ngaba ufuna ukuba namava afanayo? Ke joyina nathi! Inokwenzeka apha:
Umbutho wehlabathi lamaSilamsi kunye neTurkey esebenzisana neRussia yenza ukuthathwa kwe-EU nguTurkey: ukuphela kokuqala kwe-NATO kwe-ASSAM
Ngaba unyaka ka-2020 uza kuba ngunyaka ophumelelayo? Iminqweno emihle evela kuMartin Vrijland
tags: intsholongwane ye-Corona, kubanjwe, isenzo sobugorha, Martin, umxhasi, ilizwe elikhululekile
Vitalinfo wabhala wathi:
9 Matshi 2020 kwi-21: 33
Ngubani ongaphoswa zii-euro ezingama-2 ngenyanga. Okanye ngaba iindwendwe zakho kule ndawo ziye zoyike kangangokuba ungoyiki ukudlulisela imali kumntu ocinga ngokwahlukileyo kumntu ophakathi. Ndingathi yenza i-5 okanye i-10 yeeuo kwaye uqokelele isibindi sakho sonke ukuze ube lilungu. Imicimbi ekuthethwa ngayo kule ndawo ibaluleke kakhulu. UMartin ufanelwe yinkxaso engaphezulu. Ukuba ufunda amanqaku kaMartin ke uya kwazi ukuba ufanelekile loo nkxaso.
10 Matshi 2020 kwi-01: 15
Ewe ewe ... kwaye kwanikwa ingxelo apha kwindawo. ICoronavirus sisiphelo esifutshane eluntwini.
10 Matshi 2020 kwi-19: 06
Ndivumelana ngokupheleleyo ne @Vitalinfo. Ukuba kukho indawo enye kuphela efuna inkxaso, yile yona ..
Uluntu lweCashless kukubulawa kwabantu.
IBlokChain ithengiswa ngokungaziwa ukukucengela. Ukubuyela umva kuyinyani.
YONKE into oyithengayo iyabonakala e-blockchain .. Akusabikho mali yabantsundu .. Akusekho mfuneko yokuthenga isonka kwindawo yokubhaka eneesenti ezimbalwa ..
Imali ye-Fiat (iphepha) ayilunganga .. Kodwa i-Cashless ayinathemba ngokupheleleyo (ngokoqobo nangokomfanekiso). Bonke ubumfihlo bakho phantsi kwidreyini ..
-Thenga yonke imali ezinkozo kwaye ushiye iplastiki yakho ekhaya.
- Thenga okusemandleni akho kwimarike yendawo yakho (uyazi kwezi ndawo) okanye ngokuthe ngqo kwifama
-Ukohlwaywa kwenziwa ngurhulumente. Umatshini wokuphina umke kude. Akukho nto intsha inembuyiselo (yile njongo).
-I-CornaVirus isasazwa ngemali yephepha * ekhohlela ”
-Iibhanki zikhuthaza intlawulo ngefowuni yakho (musa).
Bafuna ukususa inyathelo eliyimali ngekheshi ukuze bazi konke malunga nawe.Akwanele kwabarhanelwa abaqhelekileyo.
Sinawo amandla. Kodwa ukuba uthatha inxaxheba, wemba owakho amangcwaba. Ke sukuthatha inxaxheba .. Hlala ngokwakho hayi okwenziwa liqela ...
Zicingele (ungavumeli umabonwakude akucingele -> lixesha lokuphosa loo mathelevishini kwinkunkuma).
Uya kuvulelwa umhlaba ..
10 Matshi 2020 kwi-22: 30
10 Matshi 2020 kwi-23: 09
I-satanist okanye i-luciferian amandla elite ngoku ifuna "ukusasazeka ekuhlaleni", ngqo ukusuka ngo-1984. Akukho ndawo yokudibana, ukungcungcuthekiswa kwezandla, ukuhlala (ucekeceke) ekhaya ukuba awuzukuhamba, uzokuziqinisekisa ukuba unayo (intsholongwane), akusekho nto uhambo, abantwana mabayeke ukuya esikolweni kodwa bafundiswe ukusuka ekhaya nge-intanethi ngutitshala onamandla elite, kwaye ngqo ukusuka ngo-1984, abantu mabayeke ukuthetha omnye komnye njalo njalo.
10 Matshi 2020 kwi-23: 31
11 Matshi 2020 kwi-00: 01
UMartin KUFANELE axhaswe. Yiza ebantwini
sukuyeka. Kungumdla wethu omkhulu ukuba izwi lasimahla, uMartin, liqhubeke likhona.
« Imbali ibonisa umjikelo weminyaka engama-90 kwaye zonke izikhombisi zibonisa ukwehla okunzulu akunakuchazeka
I-Coronavirus COVID-19 ubhubhane: intsholongwane, i-bioweapon okanye i-hoax yokuseta kwakhona kwemali kunye nolawulo lwamanani? »
Utyelelo lulonke: 2.491.073